ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင် - ရှန်ကျန်း KTC နည်းပညာ Group မှ
မူလစာမျက်နှာ / KTC အကြောင်း/ ကုမ္ပဏီ
ရှန်ကျန်း KTC နည်းပညာအဖွဲ့ (လျှော့ "KTC" အဖြစ်ရည်ညွှန်း), 1995 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ရှန်ကျန်းမြို့တွင်အခြေစိုက်, ပြားချပ်ချပ် panel က display ကို terminal ကိုထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုသည်။ ဒါဟာ LCD ကိုမော်နီတာ, LCD ကိုတီဗီ, စီးပွားဖြစ် LCD ကိုဆိပ်ကမ်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်ဆေးဝါးကုသမှု LCD ကိုဆိပ်ကမ်း၏အစောဆုံးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်အုပ်စုထက်ပိုမို 6000 ဝန်ထမ်းများကိုရှိပြီး, 400,000㎡တစ်ဦးစုစုပေါင်းကြမ်းပြင်ဧရိယာနှင့်အတူရှန်ကျန်းနှင့် Huizhou အတွက်အသိဉာဏ်ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဥယျာဉ်။ အဆိုပါအုပ်စုသည်အဓိကအားဖြင့်, Ltd. ရှန်ကျန်း KTC နည်းပညာ Co. , Ltd. , ရှန်ကျန်း KTC ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Display ကိုနည်းပညာ Co. , Ltd. , ရှန်ကျန်း KTC Intelligent နည်းပညာ Co. , ရှန်ကျန်း KTC ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Solutions Co. , Ltd, Huizhou KTC နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်ပါဝင်ပါသည် စသည်တို့ကို, Ltd, Ltd ဟောင်ကောင် KTC နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်,
အမြဲတမ်း "သမာဓိစီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်" ၏စီးပွားရေးအယူအဆမှလိုက်နာရန်, KTC အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းတွေနဲ့ဖောက်သည််ထမ်းဆောင်ရန်ကျူးလွန်နေသည်။ ဒါဟာအရည်အသွေးစနစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခိုင်မာစေနှင့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ KTC အဆိုပါ SGS ISO9001 အောက်မှာအသိအမှတ်ပြုထားပြီး: 2015 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, SGS ISO14001: 2015 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, SGS ANSI / ESD S20.20-2014 electrostatic ဥတုစံ, အပြုအမူများ၏အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Code ကို (EICC) ၏ပေါင်းစည်းမှု ပညာပေးနှင့်စက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ, etc
KTC Group ၏ထုတ်ကုန်များထိုကဲ့သို့သော CCC, TCO03, အီး, သမဝါယမ, FCC သည်, ul, SASO, TUV, ROHS စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနစတားနှင့် CECP အဖြစ်မြောက်မြားစွာပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းလွန်ပါပွီ။ ဒါ့အပြင် KTC အလွန်အမင်းအတွင်းပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အသံက PDM, ERP, CRM, SCM နှင့် MES စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုထူထောင်ခဲ့သည်။
အမျိုးသားရေး Hi-tech စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ရှန်ကျန်းအတွက်အသိအမှတ်ပြုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ R & D စင်တာအဖြစ်, KTC အသံ R & D system ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ထားပါတယ် - KTC နည်းပညာစင်တာ, စဉ်ဆက်မပြတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှစ်ခုကျော်ဆယ်စုနှစ်မှတဆင့်။ ဤသည်အလယ်ဗဟို core နဲ့ Front-အဆုံးနည်းပညာကိုသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြှင့်များအတွက်မစ်ရှင်မှုများလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ၎င်း၏ R & D ဗိသုကာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, လျှပ်စစ်, ဆော့ဝဲ, Optical, နည်းပညာနှင့်ကုန်ပစ္စည်းဦးစီးဌာနများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & D အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ပြားချပ်ချပ် panel က display ကို terminal ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းကနေအထက်တန်းလွှာရာပေါင်းများစွာသည့်စမ်းသပ်ခြင်း & စမ်းသပ်စင်တာ, ပါဝင်ပါသည်။ နည်းပညာ Center ကအောက်မှာတစ်ဦးချင်းစီ R & D ဌာနမိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာတာဝန်များကိုနှင့်အတူတာဝန်ပေးသည်အဆိုပါအဆင့်မြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (PDM သည့်စနစ်) နဲ့ပူးပေါင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသောနှင့်စက်မှုနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလမ်းကြောင်းသစ်ခြေရာခံ။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကြားကသူတို့ရဲ့ R & D အဆင့်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးရေးစွမ်းရည်ရာထူး။
တိုင်းအလုပ်သမားများ၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်, KTC စသည်တို့ကိုကျွမ်းကျင်ခွက်တဆယ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်နည်းပညာရှင်မက်လုံးပေးစီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရားထူထောင်ရေးအတွက်မှမြို့တော် input ကိုအတွက်ထူးချွန်အောင်မြင်မှုများဖန်ဆင်းတော်မူပြီ .; ဒါကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အခွက်တဆယ်အသင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ပိုပြီးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အကြီးအအားထုတ်မှု, High-caliber ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုမှန်ကန်စေသည်။ KTC တက္ကသိုလ်အသစ်ဝန်ထမ်း mentorship အစီအစဉ်သစ်ကို Backbones ရဲ့အစီအစဉ်ပြည်တွင်းရေးသင်တန်းဆရာ, အကျိုးစီးပွားအုပ်စုပြင်ပလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အခြားလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များမှတဆင့် KTC န်ထမ်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် Self-တိုးတက်မှုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်ကူညီပေးသည်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုမောဒနာပြုပြီးမှ, ကျွမ်းကျင်မှုတိုးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအားပေး။ KTC သည် "ရှန်ကျန်းအတွက်လက်သမားသင်တန်းမော်ဒယ်ကုမ္ပဏီ" နှင့် "လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုပြည့်စုံအတွက်ထူးချွန်လုပ်ငန်း" ဂုဏ်ပြုသည်။
KTC အစောပိုင်း 1990 ခုနှစ်ပီစီကွန်ပျူတာမော်နီတာ၏လယ်ပြင်သို့ ဝင်. ကတည်းကကစမတ်ပြားချပ်ချပ် panel က display ကိုလယ်ပြင်၌အကြီးယှဉ်ပြိုင်ခြင်း, အကျိုးရှိစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု, လက်ရာမြောက်သောလက်ရာလက်နှင့်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်အရည်အသွေးမြင့်၏လိုက်စားအတွက်မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှု "2008 FORBES မဂ္ဂဇင်းတရုတ် 200 UP-and-နေရဆဲ" "," တရုတ်ထိပ်တန်း 500 ပုဂ္ဂလိကကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ "," တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်း 10 အရောင်တီဗီပို့ကုန်ကုမ္ပဏီ "," တရုတ်မှာရှိတဲ့ထိပ်တန်း 100 အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များ Enterprises "အဖြစ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး ကောင်းသောလူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုယူဆောင်ခဲ့သောထိပ်တန်း 100 ဂွမ်ဒေါင်းများတွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ "," ရှန်ကျန်းအတွက်ထိပ်တန်း 100 စက်မှုဇုန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ "," ရှန်ကျန်းအတွက်ထိပ်တန်း 100 လွတ်လပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ "," ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် LCD ကိုပစ္စည်းကိရိယာ၏အကောင်းဆုံးလိမ္မော်ရောင်ပေးသွင်း ", etc ။
KTC ရဲ့စမတ်ထုတ်ကုန်တောင်အမေရိက, မြောက်အမေရိက, ဥရောပ, အာဖရိက, သြစတြေးလျနှင့်အာရှရှိနိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှရောင်းချကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတည်ငြိမ်သောရောင်းအားကွန်ယက်ကိုထူထောင်နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကျော်ကြားတဲ့လုပ်ငန်းများနှင့်အတူကောင်းသောသမဝါယမဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ထိုအနှစ်အကျော်, KTC ပြီးနောက်-ရောင်းအားန်ဆောင်မှုပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတစ်ဦးပြည့်စုံနှင့် sound system ကိုအတုသိရသည်။
ပြား panel က display ကိုအသစ်တခုဒစ်ဂျစ်တယ်, အသိဉာဏ်နှင့်ကွန်ယက်-based ခေတ်အထဲသို့ဝင်သော, KTC စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု, core ကိုနည်းပညာထိုးဖောက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု segment နှင့်စိတ်ကြိုက်မှတဆင့်စမတ်တီဗီ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ display တွေ, စီးပွားဖြစ်ပြသမှုနှင့်အခြားလယ်ကွက်မှတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာတရုတ်အတွက်ထိပ်တန်း 100 အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များ Enterprises ၏တဦးတည်းဖြစ်လာသည်။ လွတ်လပ်သော R & D စနစ်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအားသာချက်များနှင့်အတူကုမ္ပဏီအမျိုးသားရေး Hi-tech စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ရှန်ကျန်းအတွက်စည်ပင်သာယာ R & D စင်တာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်မော်ဒယ်များရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်အသစ်တောင်းဆိုချက်များကိုဖန်တီးခြင်းအတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားနှင့်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ရောင်းချမှုတိုးတက်မှုနှုန်းအသစ်အလားအလာထဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်တည်ငြိမ်ကော်ပိုရိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တင်. ဤသို့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အဆက်မပြတ်အသိဉာဏ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်နှင့်ထုတ်ကုန်မိသားစုတိုးတက်လာဖို့ endeavors ။
အနာဂတ်မှာသို့ကြည့်မျှော်, KTC အသစ်တစ်ခုပုံရိပ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်, "Customer များပထမဦးဆုံးနှင့်ထိခိုက်စေဖန်တီးလိုက်တဲ့" ၏ဝန်ဆောင်မှုအယူအဆမှလိုက်နာရန်မြင့်မားနှင့်အတူဖောက်သည်များကိုအရှင်, ဆန်းသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယင်း၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်, နှင့်၎င်း၏အသိဉာဏ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကတည်ထောင်ရန်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ် -quality စမတ် display ကိုထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ။ "နည်းပညာကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုပိုကောင်းစေ" ၏အယူအဆနှင့်တကွ, ကုမ္ပဏီစမတ်ပြားချပ်ချပ် panel က display ကိုထုတ်ကုန်၏လောကဓာတ်-class ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာမှကြိုးစား, ပိုကြီးတဲ့စကေးနှင့်အဆင့်မြင့်ဆီသို့ချီတက်သည်။